kkchha.com:: मानिस लाई मिठो निद्रा कसरी त ?
मानिस लाई मिठो निद्रा कसरी त ?
By प्रकाश धिताल June 18, 2016
प्रकाश प्रिया स्मृति – काठमाण्डौ – जेष्ठ ०४ मंगलबार
मानिसलाई उमेर अनुसार दैनिक रुपमा कम्तीमा ६ घन्टा मस्त निद्रा चाहिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा पनि विश्वव्यापी रुपमै मान्छे कम निदाउने वा निदाउन नसक्ने अनुसन्धानहरुले समेत प्रष्ट पारेका छन्। हिरो निद्रा सबै प्राणीको लागि आवश्यक तत्व हो। अनुसन्धानहरुले पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणले मानिसको निद्रा विथोलिएको देखाएका छन्। आफ्नै र बाह्य कारणले गर्दा मानिसको निद्रा अनियमित हुँदै गएको छ।
राम्रो निद्रा नलाग्नु र दीर्घकालीन रुपमा निद्रा नलाग्नुले बुढेसकालमा देखा पर्ने रोगहरु लाग्ने अनुसन्धकर्ताहरु बताउँछन्। यसले गर्दा दोस्रो खालको मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटोपना, सम्झने शक्ति घट्दै जाने, बुढो देखिनेजस्ता स्वास्थ्य समस्या चाँडै देखा पर्ने अध्ययनहरु बताउँछन्।